Raashin yari ka jirta Bariga Fog ee Puntland
Photo | Sawir hore: Suuqa Beledweyne /Cabdullaahi Salaad/Ergo
Cabdiraxmaan Taysiir 04 January, 2016 BARI
(ERGO) - Qiimaha lagu kala iibsado raashinka ayaa sare u kacay deegaanno ku yaalla bariga fog ee Puntland, taas oo ka dhalatay cunto-yari qeyb ka ah raadadkii ay roobabkii duufaannada watay ku reebeen deegaannada Bareedo, Seynweyn, Tooxin iyo Seynyar oo hoos taga degmada Caluula ee gobolka Bari.
Kiilada bariiska ah oo awal ahayd 15,000 oo shilin oo u dhiganta in ka yar hal doollar ayaa hadda mareysa 100,000 oo shilin Soomaali ah ($4.5), kiilada sokorta ah oo markii hore ahayd 15 kun oo shilin waxay hadda gaartay 110 kun oo shilin ($5), sida uu Raadiyo Ergo u sheegay Maxamuud Cali oo ku sugan Bareedo, kana mid ah dadka ay saameysay cunto-yarida.
Ismaaciil Gurey oo ah aabbe ay u joogto 8 carruur ah oo ku sugan tuulada Seynweyn, qoyskiisana uu ka mid yahay 2000 oo qoys oo ay saameysay cunto-yarida ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in uu ka mid yahay beeraleyda ku ceyrtowday roobkii dabeylaha watay, haddana lacagta uu heli karo aysan u goynin raashin.
Lafo-goray oo ah waddada keliya ee gaadiidka wada xamuulka ganacsi ee ka yimaada magaalada Boosaaso uu u soo mari jiray deegaannadaas ayaa ku xirantay roobka. Sidoo kale waxaa kacsan badda oo doonyo ay deegaannadaas ku geyn jireen badeecadaha. Markii ugu dambeysay oo deegaannadaas ay gaarto badeeco waxay ahayd dabayaaqadii bishii Sabtembar ee sanadkii hore.
Dadka deggan deegaannadaas waxay isugu jiraan xoolo-dhaqato, kalluumeysato iyo beeraley waxay ku jiraan xaalad bini’aadannimo oo liidata sida uu Raadiyo Ergo u sheegay Cabduqaadir Yuusuf Maxamed oo ah guddoomiyaha gobolka Gardafuu. “Lacag qofkii haysta xitaa meel uu wax uga iibsado ma laha,” ayuu yiri. Wuxuu sheegay habka keliya ee dadkaas cunto gargaar ah lagu gaarsiin karo inay tahay diyaarad.
Maamulka Puntland weli wax kaalmo ah ma uusan gaarsiin deegaannadaas sida uu sheegay guddoomiyaha. Laakiin wuxuu xaqiijiyay in uu maamulka Puntland ku howlan yahay sidii dhibaatadaas wax looga qaban lahaa. “Wasaaradda arrimaha gudaha waxay dhowr goor isugu yeertay hay’adaha dalka ka howlgala oo ay kala hadashay sidii wax loogu qaban lahaa dhibbaneyaasha,” ayuu yiri.
Faaduma Yuusuf Saciid (Taxadar) /AT